အမေ့သား: အမေ့သား နဲ့ ချစ်ရပါသော သောကြာ
အမေ့သား နဲ့ ချစ်ရပါသော သောကြာ
အလုပ်လည်းမသွားချင်၊လုပ်လက်စ စက်တလုံးက ကိုယ့်လက်ထဲဆိုတော့ မသွား၍လည်းမဖြစ်ပေ။
အိပ်ရာကထရေချိုး၊အဝတ်လဲ၍အဖေ့သမီးသွားဆင်းယူထားပေးသောမိုးကာအင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီကိုဝတ်ကာ ဆိုင်ကယ်ရှိရာဆင်းလာခဲ့သည်။ သောကြာနေ့သည်အစ်မသက်ဝေတို့၊ အဖေ့သမီးတို့လို စနေ၊တနင်္ဂနွေ
ပိတ်သောသူတွေအတွက်တော့သာယာသောနေ့တနေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမေ့သားအတွက်တော့ ဟိုပတ်ပျိုးလေးလို"ထူးမခြားနား"ပေါ့။ဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးCoporation-roadကနေPIEပေါ်တက်၊lane2 ကနေမှန်မှန်စီးလာရာကရှေ့ကကားတစီးရဲ့အမှတ်မထင်အုပ်လိုက်တဲ့ဘရိတ်မီးရောင်သည်ကိုယ့်မျက်စိထဲ ရဲကနဲမြင်လိုက်ရတော့တပြိုင်တည်းဆိုသလိုရှေ့နောက်ဘရိတ်ဆွဲနင်းလိုက်မိသည်။သွားပြီ! နောက်ဘီးသည်
ဘယ်လိုနေသေးလဲမေးသည်။စင်ကာပူတွင်သူ့လိုလူမျိုးရှားပါးလိမ့်မည်။သူနဲ့လားလားမှမဆိုင်ပေမဲ့ကားပေါ်မှဆင်းလာကာ ကူညီခဲ့သည်။ကျွန်တော်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့စဉ်းစားမိသည်၊ဖုန်းဆက်လိုက်သည်။အမေနဲ့ တည့်တည့်တိုးလေသည်။
အမေ့အသံသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပြည်နဲ့အဖေ့ကိုလှမ်းအော်ကာဆိုင်ကယ်လဲသည့်နေရာကိုမေး၍အဖေ့ကို အမြန်သွား၊ကလေးဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ဆိုသောအမေ့အသံသည်ကျွန်တော့်ရဲ့ဒဏ်ရာတချို့တဝက်သက်သာသလို ခံစားမိသည်။အဖေ့သမီးကိုတော့မခေါ်ဖြစ်ပါ။သူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကအမေ့ထက်ပိုသလိုသူ့ အတွက်လည်းစိုးရိမ်သော
ပြောပြ၍ဆိုင်ကယ်ရယ်၊ယာဉ်ထိန်းရဲရယ်၊အဖေရယ်၊အတူထားခဲ့၍လူနာတင်ကားဖြင့်NUH သို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
ကားပေါ်တွင် မေးကြပြန်သည်၊ ဘယ်နားကနာလဲ။ ဘယ်ဆေးနဲ့ မတည့်ဖူးလဲ။ သက်သာလား။
အသက်ကသာလူ့ဘဝစဖို့(၄)နှစ်ပဲလိုသည်၊ဆေးရုံသို့တခါမှကိုယ်ကိုတိုင်မတက်ဖူး၊သူများတွေကိုသာလိုက်ပို့ လိုက်စောင့်ပေးဖူးတာ၊ထိုအချိန်တွင်အစ်မသက်ဝေရဲ့အမျိုးသားကိုကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့အားငယ်စိတ်များ နည်းနည်းပျောက်သွားသည်။ အစ်မသက်ဝေဖုန်းဆက်၍ ကြိုပြောထားသည်ထင်...
ကိုစိန်ရဲ့ပိုစ်ကိုသွားသတိရမိသည်။လက်ကိုဒီလိုထား၊တံတောင်လေးကိုကွေးထားပါ၊ဒူးဂေါင်းလေးနည်းနည်းထောင်၊ ခြေထောက်အောက်ကို ချ၊ လက်ကို မကွေးထားနဲ့ဆန့် ထားပါ၊ ဟုတ်ပြီ ရိုက်မယ်နဲ့၁၀ ပုံလောက်အရိုက်ခံလိုက်ရသည်။
ပြီးတော့ အရေးပေါ်လူနာဆောင်သို့ထပ်မံ လက်လွဲခြင်းခံရပြန်သည်။
နပ်စ်မလေးနှစ်ယောက်လာ၍ဆုတ်ပြဲသွားသောဒဏ်ရာများကိုဆေးလိမ်း၊ဆေးထည့်ပတ်တီးစည်းပေးပြီး ကဲ..သွားလေရော့လဟယ် ဟုဆိုကာကုတင်ပေါ်တွင်ပက်လက်တင်ကာ လက်ပင်မပြထွက်သွားကြသည်။
အရိုးမကျိုးပါတဲ့၊ လဲကျတဲ့ အရှိန်ကြောင့် နာတာပါလို့ပြောပြီး၊
အိမ်ရောက်တော့စိုးရိမ်တဲ့အမေ့ရဲ့မျက်နာရယ်၊ပူပန်နေတဲ့အဖေ့သမီးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုခဏမျှလစ်လျှုရှုပြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။အိပ်ရာနိုးတော့အဖေပြန်ရောက်နေပြီ၊တဇာတ်လမ်းတစခန်းထရပြီ၊ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိက မှာသွားသည်။ဆေးရုံကဆင်းလာလျှင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားပါတဲ့အဖေပေးသောဖုန်းနံပါတ်ခေါ်တော့အရာရှိက အင်တာပေါ် ငပြုးထိုင်ပြန်လေပြီ။
ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ? ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ? ဘယ်နေရာမှာလဲ? အရှိန်ဘယ်လောက်နဲ့ မောင်းလို့လဲ?
ဆေးရုံမှာ (လား) လာသမျှ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ နဲ့ တွေ့ မှ (လဲ) ရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်....
သို့သွား၍အရာရှိနဲ့တွေ့ခဲ့သည်။အခန်းလွတ်ထဲတွင်အရာရှိနှစ်ယောက်ဗျုးပြန်လေသည်။ မထူးခြားသောမေးခွန်းများစွာမေးမြန်းပြီးထူးခြား၍ မူးသွားစေသောအရာများကနောက်မှကပ်ပါလာခဲ့သည်။
စင်ကာပူတွင်နေစဉ်ကာလတလျှောက်လုံးတခါမှမကြုံခဲ့ဖူးသောအဖြစ်မို့ငေးကြောင်ကာ ဆွံအသွားရသည်။
ခုလိုဖြစ်တဲ့အတွက် လိုင်စင်ပွိုင့် ဖြတ်ခံရမည်။ ဒဏ်ငွေ ဆောင်ရမည်။ တရားရုံးသို့ သွားရမည်။ ခဏမျှအာစေးကပ်ပြီး ဆရာရယ် အခုဟာက ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်မှောက်တာပါ ဘယ်သူမှလည်းမတိုက်မိပါဖူး၊
အရေးယူခွင့်ရှိသည်တဲ့ ဘာတတ်နိုင်မည်နည်း။ ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းပဲပေါ့၊
ဖြတ်မယ်ဆိုအဖြတ်ခံရုံ၊ဆောင်ဆိုတော့လည်းဆောင်ရုံ၊တရားရုံးဆိုတော့လည်းရုံးရတာပေါ့လို့စဉ်းစားတုန်း သို့သော်မင်းလိုင်စင်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုကြည့်တာ(၆)နှစ်ကျော်ပြီ၊ဘာပြစ်မှုမှမရှိဖူး၊ဒါကြောင့်ငဲ့ညှာသောအားဖြင့် တကြိမ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်၊(၀ယ်ယူ)ဆိုပြီး၊နောက်တခါဆိုရင်တော့ဘာညာပေါ့ဆိုတာနဲ့ဝမ်ဆွေ့ ဝမ်ဆွေ့ ဝမ်ဝမ်ဆွေ့ လုပ်ပြီးမြန်မြန်လေး လစ်လာခဲ့ရလေသည်။
ဆိုင်ကယ်လေးကတော့ဆေးရုံရောက်နေပြီ။မနေ့ညကမဲရုံဖွင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍အမေ့သားဆိုင်ကယ် ဆက်စီးသင့်၊ မစီးသင့် မဲဆန္ဒခံယူတော့ ၄ : ၁ နဲ့မဲရှုံးလို့အမေ့သား ဆိုင်ကယ်ပြန်ရောင်းရပေတော့မည်။
( အစစအရာရာ လိုက်ပါကူညီပေးသော အစ်မသက်ဝေ နှင့် ကိုကြီး၊ စိုးရိမ်ပူပန်စွာ(ဆိုင်ကယ်လေး)
ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဟု မေးကြသော AaB ဝိုင်းတော်သားအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်)
Posted by အမေ့သား at Wednesday, November 16, 2011
Anonymous November 16, 2011 at 9:30 AM
ဘာမှ မဖြစ်လို့တော်ပါသေးရဲ့ ရောင်းလိုက်တာမှန်ပါတယ်။ စိုးရိမ်မယ့် သူတွေ များကြီးပဲ ပျော်စရာကြီးး))
Anonymous December 1, 2011 at 9:22 PM
ဒီဘလော့ကိုခုမှဖတ်မိလို့ သတင်းမေးနောက်ကျသွားတယ်.. ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်တာ ကံကောင်းတာပေါ့ :D
အမေ့သား နဲ့ သိကြားမှာတမ်း